Vondron’ny fiarahamonina sivily (OSC) : « Manjaka ny kolikoly, tsy misy ny fampandrosoana” | NewsMada
Vondron’ny fiarahamonina sivily (OSC) : « Manjaka ny kolikoly, tsy misy ny fampandrosoana”
Mampaneno lakolosy ny Vondron’ny Fiarahamonina sivily (OSC) Rohy, amin’ny sakana tsy hisian’ny fandrosoana eto amintsika. “Anjakan’ny kolikoly ny famoahana an-tsokosoko ny harena voajanahary, ny tsy fandriampahalemana, ny lafiny fananan-tany ary ny fifidianana”, hoy izy ireo.
Sakana tsy hisin’ny fampandrosoana eto Madagasikara ny kolikoly amin’ny lafiny maro. Io ny fenehoan-kevitry ny fikambanana fiaraha-monina sivily (OSC), mivondrona ao anatin’ny antsoina hoe Rohy, mahatratra 19, ny 5 febroary teo. Lafin-javatra efatra ny tena anjakan’ny kolikoly eto amintsika. Voalohany, ny fandripahana ny harena voajanahary, toy ny andramena, ka ihazakazahan’ny fanjakana ny fivarotana ireo tahiry nogiazana. Ahian’izy ireo misy ny kolikoly sy ny tsindry atao amin’ny fitsarana. Tsy ampy ny fiaraha-miasa amin’ny OSC sy ny teknisianina amin’ny ala, ka omena fahafahana vonjimaika ny voarohirohy ary misy ny sasany tafatsoaka any ivelany. Eo koa ny tsimatimanonta, manondrana sokatra, dingadingana, vano, sns.
Tsy voahaja ny zon’olombelona
Faharoa, efa nanaitra ny sain’ny rehetra ny OSC, ny volana novambra 2015, amin’ny fanjakan’ny kolikoly amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny fakam-bola tsy mazava amin’ny vahoaka any Atsimo. Tsy voahaja ny zon’ny olombelona amin’ny fampirorohona sy ny fandratrana ary famonoana ny sivily. Mety misy amin’ireo manao izany ny mpitandro filaminana. Efa nisy ny fiaraha-midinika eo amin’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny minisiteran’ny Fiarovana ary ny OSC.
Fahatelo, ny lafiny fananan-tany, ahitana fakana tany efa voajary an-taonany maro ataon’ny mpanao kolikoly na mpandraharaha vaventy. Fahefatra, ny fividianana ny safidim-bahoaka amin’ny fifidianana amin’ny alalan’ny fizarana zavatra mandritra ny fampielezan-kevitra. Ahiana ny famotsiam-bola amin’ny fifidianana sy ny tsy fisian’ny fahaleovantena ho an’ny Ceni sy ny tetibolany tsy voasoratra mazava ao anaty tetibolam-panjakana.
Manoloana ireo, mangataka ny handraisan’ny isan’ambaratonga andraikitra ny OSC Rohy, satria hanimba ny endriky ny firenena.
Ireo nanao sonia ny fanambarana : PFNOSCM- Alliance voiahary gasy- Sif- CNPFDH-Kmf/Cnoe- OPTA- Saf-FJKM- Agevaren Développement- ONG Saha- ONG Fiantso- AIFM- MSIS/Tatao- CCOC-Liberty 32- Gerp- Gnefm